राजेश हमाल महानायक हुन् कि हैनन् भन्ने विषयमा अब नेपालमा 'गृहयुद्ध' नै हुन्छ कि भन्ने खतरा पैदा भैसकेको छ । राजेश हमालको पक्षमा पुराना जमानाका कलाकारहरू एकाएक जुर्मुराएर युट्युबदेखि टेलिभिजन अन्तर्वार्तासम्ममा बोल्न थालेका छन् । राजेश हमालको डायलग सुनेर हुर्किएका युवाले सामाजिक सञ्जालमा आगो नै सल्काएका छन् ।
चलचित्रमा प्राय: गुण्डाको रूपमा उपस्थित हुने राजेन्द्र खड्गीले त राजेश दाइजस्तो हिरो अब यो धर्तीमा कहिल्यै पैदा नहुने भनेर ठोकुवा गरिसकेका छन् । राजेन्द्र खड्गीलाई कुनै जमानामा हेटौंडामा हातले हानेर राँगो ढालेको आरोप लागेको थियो । राजेश दाइको फाइट कहिलेकाहीँ साँच्चिकै लाग्दा रिस उठेपनि उनले महानायक राजेश हमाल नै हो भनेर च्यालेञ्ज दिएका छन् । दीपाश्रीलाई सानो फुच्ची बैनी, दाइ–दाइ भन्दै अस्तिसम्म चोभारमा छायांकन गरेको हेर्न आउने नानी भनेका छन् ।
महिला भनेर हेपेको होला नि, भनेर दीपाश्री निरौलाका पक्षमा पनि उनका निकटका मानिसहरू सामाजिक सञ्जालको लडाइँमा व्यस्त छन् । 'यूएस पटक–पटक गएकी तर अमेरिका पहिलोपटक पुगेकी' एकजना नायिका पनि दीपा दिदीको समर्थनमा उत्रिएकी छन् । पत्रकारले आफ्नो टीआरपी बढाउन उल्टोसुल्टो प्रश्न गर्ने भएकाले अबदेखि चनाखो हुन दीपकराज गिरीले तमाम कलाकार जगतलाई उपदेश दिएका छन् । घुमाउरो तरिकाले दीपालाई काखी च्याप्नु दीपकको कर्तव्य होला ।
यो कुरा सत्य हो कि, रेडियो नेपालको धनियाँ र नेपाल टेलिभिजनमा एक हास्य कलाकारको रूपमा ख्याति कमाएकी दीपाश्री निरौलाको हाड नभएको जिब्रो चिप्लियो वा योगा ध्यानमा समाहित हुन नसकेको आत्मा भड्कियो त्यो त पशुपतिनाथ नै जानुन् तर उनले राजेश हमाललाई जनताले माया, सम्मान र प्रेमका साथ दिएको उपाधि 'महानायक' माथि प्रश्न उठाउने उनको कुनै हैसियत थिएन । उनको त्यस प्रकारको हैसियत निर्माण भैसकेको भए सामाजिक सञ्जालमा आगलागी हुने थिएन । आगलागी निभाउने दमकल अझैसम्म भेटिएको छैन ।
दीपाश्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा उपेन्द्र पौड्याल नामका एक व्यक्तिको आक्रोश छ, 'दीपाका लागि महानायक भनेपनि महामानव भनेपनि केवल दीपकराज गिरी हो ।' उनको स्टाटसमा थप कुरा पनि उल्लेख छ, जसलाई यहाँ उद्धृत नगरौं ।
सामाजिक सञ्जालमा यस्ता आक्रोश लाखौं छन् । त्यस्तै शर्मिला रोका नाम गरेकी नानीले फेसबूकमा लेखेकी छन्- 'दीपाश्री तिम्रो अभिनय हामीले हेरेका छौं । गोठको भैँसी पनि हामी आफैँ हेर्ने गरेका छौं । अति भयो, एकपटक आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नुहोला ।'
दर्शकका यस्तै आक्रोश देखेर हाल दीपाश्री निरौलाजी 'पेनिक' भएकी छन् र उनमा एक प्रकारको डिप्रेसन देखा परेको चलचित्र जगतको बारेमा लेखिरहने केही पत्रकार मित्रहरू बताउँछन् । यो कुरा साँचो भएर नै होला दीपाश्री निरौला निकटका केही कलाकारहरूले उनको पक्षमा फेसबूकमा स्टाटस लेखिरहेका छन् । नायिका केकी अधिकारीले त महिला भनेर दीपाश्री दिदीलाई नहेप्न भनेर कताको कुरा कता पुराएर मोडेकी छिन् । म गर्छु आग्राको कुरा, तिमी गर्छौ गाग्राको कुरा भनेजस्तो छ केकीको बचाउ ।
के दीपाश्री निरौला राजेश हमालको बराबरी हैसियतमा पुगेकै हुन् त ? अथवा उनी चलचित्र निर्मात्री भैसकेपछि अन्य महानायकहरू जन्मिएका हुन् त? दर्शकले भनेजस्तै दीपाका लागि महानायक अर्कै व्यक्ति हुन् त ? यस्ता प्रश्नहरू पनि जन्मिएका छन् । तर दर्शकको मात्रै कुरा हैन यो विवादपश्चात मिडियामा आएका दर्जनौं चलचित्रकर्मी तथा निर्माता/निर्देशकले दीपाले आफ्नो मुखमा आफैँ थुकेकोसम्म भन्न भ्याएका छन् । यसरी अचानक विवादमा तानिएपछि दीपाश्री निरौलाको जीवन नै 'छक्कापञ्जा' जस्तो भएको छ ।
नेपाली चलचित्र विकासका लागि धेरै योगदान दिएका तथा कलाकार समेत रहेका युवराज लामाको कथन पनि यस्तै थियो । केही चलचित्र चल्यो भन्दैमा आफू कहाँबाट आएको हो, आफ्नो धरातल के हो र नेपाली चलचित्र यहाँसम्म कसरी आइपुग्यो भनेर नबिर्सिन दीपाश्री निरौलालाई उनले अनुरोध गरेका छन् । उनले भनेका छन्- राजेश हमाल कलाकार (हिरो) मात्र हैन उनको जस्तो पर्सनालिटी अरू सिनेमाकर्मीको नभएको उनको तर्क छ ।
राजेश हमालद्वारा अभिनित चलचित्र हामी तीन भाइ, वसन्ती, ढुकढुकी, देउता, देउकीजस्ता पुराना चलचित्र हेरेको थिएँ । राजेश हमाल अभिनित चलचित्रको गीत 'रातो टीका निधारमा टलक्कै टल्कियो' निकै मन पर्छ । यो अल्लारे चलचित्रको गीत हो । यस्ता दर्जनौं चलचित्रले राजेश हमालको नायकत्व निर्माण गरेको हो । उनको जिवन्त अभिनयले उनलाई निर्विकल्प नायकत्व प्रदान गरेको छ ।
नेपाली सिने जगतको कुरा गर्दा राजेश हमालको पुस्ता नै सम्झन योग्य एउटा पुस्ता हो । पुस्ता भन्नुको अर्थ उनको समयमा छायांकन गरिएका चलचित्रका दृश्यहरू, गीतहरू अझै पनि यादगार छन् । जस्तो कि गाउँले चलचित्रको गीत 'गोली शिशाको, मेरो माया किन रिसाको; ताजा खबर, ज्यान माया नहेर है कर्के नजर' आजको मितिसम्म आइपुग्दा पनि सम्झन योग्य गीत छ ।
यही गीतमा राजेश हमालसँग एउटा निन्याउरो अनुहार लिएर नाचेकी थिइन्, दीपाश्री निरौला । वास्तवमा दीपाश्रीलाई तिनै 'गोली शिशाको' गीतमा राजेश हमालसँग नाचेपछि नै दर्शकहरूले चिनेको कुरा जानकारहरू बताउँछन् । अर्की नायिका रेखा थापाले पनि राजेश हमालसँग नै पहिलोपटक 'तिम्रो मन त चक्कु छुरी' भन्ने बोलको गीत र चलचित्र 'हिरो'मार्फत् सिने क्षेत्रमा पाइला टेकेकी थिइन् । तर उनले राजेश हमाललाई महानायक हैन भनेर भनिसकेकी छैनन् ।
पछिल्लो समयमा दीपाश्री निरौलाको छवि फेरिएको छ । रेडियो नेपालको धनियाँ, टेलिभिजनको हास्य कलाकार हुँदै अब चलचित्र निर्मात्री बनेकी छन् । हास्य कलाकार जोडीका रूपमा चिनिएका दीपकराज गिरीसँग मिलेर उनले 'छक्कापञ्जा' नामको चलचित्र निर्माण गरिन् । जुन केही हदसम्म सफल पनि भयो । तर दीपाश्री निरौलाले गर्नुपर्ने धेरै छ । अहिले उनी निर्मात्री भन्दा पनि हास्य कलाकार नै हुन् । उनी मात्र हैन म त भन्छु अहिलेका नब्बे प्रतिशत चलचित्रकर्मी केवल हास्य कलाकार हुन् ।
मैले अहिलेसम्म राजेश हमाललाई प्रत्यक्ष देखेको छैन, भेटेको छैन । तर चलचित्रको पर्दामा आफ्नो अभिनयमार्फत दर्शकलाई यस्तै खुशी दिएका कारण राजेश हमाल हिजो, आज र भोलि सदैव महानायक भइरहनेछन् ।'के भन्ने हाम्रो समय,दश मोहर महिनाको कमाइ;हाम्रो युगको पानी राम्रो,हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो !'